काठमाडाैं महानगर अपडेट : ७३ हजार ५ सय मत गणना सकियाे, कसकाे मत कति ? - jagritikhabar.com
काठमाडाैं महानगर अपडेट : ७३ हजार ५ सय मत गणना सकियाे, कसकाे मत कति ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहको मत २८ हजार नाघेको छ । ७३ हजार ५ सय मत गणना हुँदा साहको लौरो चुनाव चिन्हमा २८ हजार २० मत प्राप्त भएको छ ।
नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितलाई १४ हजार ५४८ मत र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई १३ हजार ९९० मत प्राप्त भएको छ ।